Fakana an-keriny mpiasan’ny Kraoma: 100 tapitrisa Ar ny takin’ny ireo mpanao kidnapping | NewsMada
Fakana an-keriny mpiasan’ny Kraoma: 100 tapitrisa Ar ny takin’ny ireo mpanao kidnapping
Par Taratra sur 25/07/2018
Nisy naka an-keriny, afakomaly maraina, ny efa-dahy mpiasan’ny orinasa Kraoma, ao Brieville Tsaratanàna. Mitaky vola 100 tapitrisa Ar amin’ny depiote iray (?) sy amin’ny orinasa Kraoma ireo mpaka an-keriny ho tambin’ny famotsorana ireo mpiasa ireo.
Raha mbola tsy votsotra fa mbola any am-pelatanan’ireo jiolahy i Abdoul Aziz Mansour, ilay teratany tompon’ny orinasa Singer, nisy naka an-keriny tetsy Tsaralalàna, fantatra izao fa nalain’ny jiolahy an-keriny koa ny mpiasan’ny orinasa Kraoma miisa efatra ao Brieville Tsaratanàna. Araka ny loharanom-baovao azo antoka, nalain’ireo mpaka an-keriny teny amin’ny “chantier” niasany izy efa-dahy ireto, afakomaly tamin’ny 7 ora maraina. Tonga toy ny fanaony isa-maraina ireo mpiasa ka nohararaotin’ireo jiolahy naka an-keriny tamin’izany izy efa-dahy ireto. Tao anatin’ny fotoana ny nanatanterahanan’ireo mpaka an-keriny ilay fakana an-keriny ary samy tsy nisy nanampo izany ireo mpiasa sasantsasany, raha ny vaovao voaray hatrany. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny toerana nametrahan’ireo mpaka an-keriny azy ireo hatramin’izao fotoana izao. Voalazan’ny loharanom-baovao marim-pototra hatrany fa nangataka vola 100 tapitrisa Ar amin’ny depiote iray sy amin’ny orinasa Kraoma ireo mpaka an-keriny ho tambin’ny famotsorana ireto efa-dahy nalain-dry zalahy an-keriny ireto.
Hovonoin’ireo mpaka an-keriny ireo mpiasa…
Mbola any am-pelatanan’ireo jiolahy, araka izany, ireto mpiasan’ny orinasa Kraoma ireto. Nohamafisin’ny loharanom-baovao hatrany fa nanome fotoana ilay depiote sy ny orinasa (hatramin’ny omaly hariva io) ireo mpaka an-keriny amin’ny tokony hanomezan’izy ireo ny vola takin-dry zalahy fa raha tsy izany, hovonoin-dry zalahy tsikelikely ireto mpiasa nalaina an-keriny ireto. Voalaza koa fa ananan’ireo mpaka an-keriny vola ity depiote ity taloha, saingy tsy nomeny ny volan’izy ireo ka izany ny nahatonga azy ireo haka an-keriny ireto mpiasa ireto. Tsy fantatra mazava rahateo na avy amin’ny antoko politika iza na iza ity depiote itakian’ireo mpaka an-keriny vola ity. Tsy mbola fantatra mazava koa hoe iza marina ilay depiote. Any amin’ny depiote sy ny orinasa, araka izany, ny hoavin’ireo mpiasa efa-dahy nalain’ireo mpaka an-keriny ireo. Andrasana ny tohin’ity raharaha ity.